Nhau - Kuongorora uye chimiro quo yemusika wekutengesa wekunze auto auto wiring muna 2021
Kuongorora uye chinzvimbo cheiyo yemusika wekutengesa wekunze auto auto wiring muna 2021
Iwo auto zvikamu musika wakakura, uye mutengo wayo wepasirese wepasi rose wasvika 378 bhiriyoni emadhora ekuUS, iine gore rekukura mwero weinenge 4%.
Mhando dzese dzezvikamu zvemotokari, pakati padzo izvo zvinonyanya kufarirwa zviri kutsiva auto zvikamu. Nekuti mota dzinopfeka uye dzinobvaruka pasi pekushandisa chaiko, pane kudiwa kukuru kweizvi zvigadzirwa mumusika:
--—Maintenance categories such as filters, brakes, matai, kumiswa, nezvimwe.
——Mhando dzemagetsi dzakadai semagetsi emagetsi, magetsi ekutanga, ma alternator, mapampu emafuta uye majekiseni
--—Bushings, engine mounts, strut mounts, control maoko, bhora rakabatana, stabilizer zvinongedzo uye zvimwe zvinomiswa zvikamu, zverabha zvikamu uye zvemagetsi zvikamu.
——Wiper mashizha nemabatiro emusuwo nezvimwe zvigadzirwa zvinoshandiswa mukati nekunze kwemotokari.
Iyo indasitiri yemotokari indasitiri yepasirese iri pachayo, uye akawanda maronda emota anotengesa mune dzinopfuura nyika imwe kana dunhu. Kunyangwe yega yega mhando uye modhi inogona kunge iine zita rakasiyana munyika dzakasiyana nematunhu, zvemukati neinjini zvinosiyanawo. Asi kazhinji, zvikamu zvakawanda zvinowirirana zvakanyanya uye zvinogona kuchinjiswa kumotokari munyika dzakasiyana nematunhu.
Nekudaro, kazhinji kutaura, mutengesi network iyo inopa zvikamu zvemota inowanzo kuve yakasarudzika kune yega nyika uye nharaunda, izvo zvinogona kutungamira kune kwakakura kusiyanisa kwemitengo mukutengesa-pamuganhu kutengesa kwezvimotokari zvikamu. Nekudaro, yakakwira-mutengo kana yakaoma-kuwana-zvikamu uye zvikamu zvakagadzirwa kune dzimwe nyika vatengi vane kudiwa kwakasimba kwezvikamu zvemotokari. Iyo yepamusoro-inoshanda zvikamu musika kuMiddle East "izere nesimba", uye misika kuEastern Europe, Russia, Austra.
Post nguva: Mar-19-2021
Kumabvazuva kweXingfu Road, Nanchang, Jiangxi, China
Nhare: + 86-791-87637282